rakarukwa jira Fekitori | China yakaputirwa machira Vagadziri, Vatengesi
Wholesale 100% polyester yakavharwa pachena yakarukwa mitambo yemicheka mbatya
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iri jira rakabatana, chinhu nhamba HS080, chakarukwa ne100% Polyester. Iri jira rakarukwa rakarukwa jira rakarukwa kaviri. Yakakora kupfuura jira rejezi rimwe chete, rakafanana nezvidimbu zviviri zvejezi rakasungirirwa kumashure neshinda imwechete. Iyo jira rakapindirana jira rine chimiro chakafanana kune ese kumberi uye kumashure kweshure. Iyo ine michina yakasununguka uye yakasununguka kupfeka ruzivo, izvo zvinoita ...
100% Polyester chena pique dzakarukwa jira rehembe
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi polyester pique jira, chinhu nhamba HS865, yakarukwa ne100% polyester. Iyo pique yakarukwa jira inoratidzira riibvu-senge dhizaini iyo inogona kuumba akasiyana mangoda-senge kuruka. Iri jira repiki rinopa mweya uye wekuwedzera mweya kana uchinge uchishandisirwa polo shati. Tichienzanisa nemachira ejersey, jira repique rakasimba uye rine hupamhi uye magadzirirwo, ratidza ziya shoma. Izvo zvakaipira ndezvekuti ...
40% Cotton 60% polyester rakarukwa rakarukwa jira rehembe
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iri rakarukwa jira, chinhu nhamba HS213, rakarukwa ne40% donje 60% polyester. Iyi polyester donje jira rakapetwa juzi rine polyester kumeso uye donje kumashure. Nekuda kwemukati wedonje, hunyoro wicking kuita kwakanaka kwazvo, panguva imwe chete, ine zvakanakira kusimba kwakanaka, kwakanaka draping uye kwete nyore kuunyana. Izvi Poly donje rakarukwa dzakarukwa jira chinoitwa ne weft kni ...
High yepamusoro zvishandiswezve polyester dzakarukwa pique pajira riya jira kuti Polo hembe
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iri jira repiki, chinhu chinhu HS863, chakarukwa ne100% Polyester. Yedu polyester pique yakarukwa jira rudzi rweyakafuka-yakarukwa jira. Iyo pique yakarukwa jira inoratidzira riibvu-senge dhizaini iyo inogona kuumba akasiyana mangoda-senge kuruka. Iri jira repiki rinopa mweya uye wekuwedzera mweya kana uchinge uchishandisirwa polo shati. Tichienzanisa nemachira ejersey, jira repique rakasimba uye rakadzima ...
100% Polyester inofema yakasimba diki pique rakarukwa jira re-t-shati
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iri jira repiyano, chinhu chinhu HS018, chakarukwa ne100% Polyester. Yedu polyester pique yakarukwa jira rudzi rweyakafuka-yakarukwa jira. Iyo pique yakarukwa jira inoratidzira riibvu-senge dhizaini iyo inogona kuumba akasiyana mangoda-senge kuruka. Iri jira repiki rinopa mweya uye wekuwedzera mweya kana uchinge uchishandisirwa polo shati. Tichienzanisa nemachira ejersey, jira repique rakasimba uye rakadzima ...
Nylon polyester uye spandex nakisa nyoro bhurasho inopindirana jira
Chigadzirwa Chigadzirwa. Iri jira rakarukwa rakarukwa jira rakarukwa kaviri. Yakakora kupfuura jira rejezi rimwe chete, rakafanana nezvidimbu zviviri zvejezi rakasungirirwa kumashure neshinda imwechete. Iri jira kumeso divi rakatsemurwa uye kumashure kwaro kwakakweshwa. Iyo yakakodzera machira epamusoro, hoodie, yechando chipfeko. Muna o ...
74% Polyester 26% spandex yakamisikidzwa yakapfekedzwa yakarukwa jira rekupfeka zvekupfeka
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi polyester spandex inopindirana jira, yedu chinyorwa nhamba HS759, yakarukwa ne74% polyester, uye 26% spandex. Iri jira rakarukwa rakarukwa jira rakarukwa kaviri. Yakakora kupfuura jira rejezi rimwe chete, rakafanana nezvidimbu zviviri zvejezi rakasungirirwa kumashure neshinda imwechete. Iyo ine yakasarudzika brushed tech ine yakanaka chaizvo kubata. Iyo ine yakanaka kutambanudza uye kufema, izvo zvinoita kuti ive yakanyanya s ...
Matte polyester spandex yakatambanudza yakaputira machira emitambo
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi polyester spandex yekumonera jira, yedu chinyorwa nhamba HS314, yakarukwa ne 87.5% polyester uye 12.5% ​​spandex. Iyi polyester spandex inopindirana yakarukwa jira jira rakarukwa kaviri. Yakakora kupfuura jira rejezi rimwe chete, rakafanana nezvidimbu zviviri zvejezi rakasungirirwa kumashure neshinda imwechete. Iyo jira rakapindirana jira rine chimiro chakafanana kune ese kumberi uye kumashure kweshure. Th ...
100% Polyester pique dzakarukwa jira repombi shati
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iri pique rakarukwa jira, chinhu chinhu HS014, chakarukwa ne100% Polyester. Yedu polyester yakarukwa pique jira rudzi rwejira rakarukwa kaviri. Iyo pique jira inoratidzira riibvu-senge dhizaini iyo inogona kuumba akasiyana mangoda-senge kuruka. Rutivi rwayo rwekuseri rwakati sandara. Iri jira repiki rinopa mweya uye wekuwedzera mweya kana uchinge uchishandisirwa polo shati. Tichienzanisa nemachira ejersey, jira repique ndere ...
Mutengo wefekitori 100% polyester yakanamatira yakarukwa jira ine michina yakatambanudzwa
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi polyester yekumonera jira, yedu chinyorwa nhamba HS214, yakarukwa ne100% polyester. Iri jira rakarukwa rakarukwa jira rakarukwa kaviri. Yakakora kupfuura jira rejezi rimwe chete, rakafanana nezvidimbu zviviri zvejezi rakasungirirwa kumashure neshinda imwechete. Iyo jira rakapindirana jira rine chimiro chakafanana kune ese kumberi uye kumashure kweshure. Iyo ine michina yakasununguka uye yakasununguka kupfeka ...
Hunyoro-hunyoro-polyester yakapetwa kaviri yakarukwa jira remitambo
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi polyester inopindirana yakarukwa jira, yedu chinyorwa nhamba HS040, yakarukwa ne100% polyester. Iri rakarukwa jira rakarukwa jira rakarukwa kaviri. Yakakora kupfuura jira rejezi rimwe chete, rakafanana nezvidimbu zviviri zvejezi rakasungirirwa kumashure neshinda imwechete. Iyo jira rakapindirana jira rine chimiro chakafanana kune ese kumberi uye kumashure kweshure. Iyo ine michina yakasununguka uye mweya ...
Polyester spandex inofema jacquard inopindirana yakarukwa jira remitambo
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iri rakarukwa jira, chinhu chinhu HS881, chakarukwa ne90.8% Polyester uye 9.2% Spandex. Iyi polyester spandex inopindirana jira jira rakarukwa kaviri. Yakakora kupfuura jira rejezi rimwe chete, rakafanana nezvidimbu zviviri zvejezi rakasungirirwa kumashure neshinda imwechete. Nemajacquard mamiriro, jira iri rinofema uye rakanakira kupfeka. Iyo yakasununguka uye yakapfava, whic ...
Chii chinonzi pique jira, uye nei iri ...
Kutanga, iwe ungangosangana nemhando dzakasiyana siyana nemhando dzejira dzaungangodaro usiri kuziva iwe kana iwe uchitsvaga akasiyana machira ty ...
Chii chinonzi tricot jira?
Tricot inouya kubva muchiito chechiFrench tricoter, zvinoreva kurukwa. Mucheka weTricot une yakasarudzika zigzag dhizaini ine dhizaini kune rumwe rutivi uye yakatsetseka pa ...